Dutchtown ရှိ Teatopia, St. Louis, MO • DutchtownSTL.org
အင်္ဂါနေ့ - တနင်္ဂနွေနေ့
Teatopia, 2606 ခြာရိုကီစိန့်
ဖြစ်ရပ် 26:2019 pm တွင် @ ဇန်နဝါရီလ 12, 00
နှစ်နှစ်မှရွှင်လန်း! ချစ်တယ် သရေသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဒုတိယနှစ်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းပြီးချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့နေရာပါ။
ဖြစ်ရပ် 1:10 pm တွင်စက်တင်ဘာလ 30st
Teaple, ကလေးတွေကိုယူလာပါ၊ ကြီးကျယ်သောပုံပြင်များ၊ လက်ဖက်ရည်ပူနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရှိနေခြင်းစနေနေ့တိုင်းတွင်ပျော်မွေ့ကြပါ။ စစ်ဆေးပါ Facebook အဖြစ်အပျက်စာမျက်နှာ အားလုံးရက်စွဲများအဘို့။
Teatopia's Story Time အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဒီနေရာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12th, 2021 .
ဒိန်းမတ် သောနေရာများ ကာဖီဆိုင် သရေ